မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတစ်ကာသံရုံးများ by popolay.com
09 Jul 2018 1,709 Views
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတစ်ကာသံရုံးများ
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံတစ်ကာသံရုံးများနဲ့ သံရုံးတွေရဲ့လိပ်စာကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်...
အမှတ်(၁၁၀) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်.... အမေရိကန်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၃၆ ၅၀၉) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၈၀) ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂:၃၀)နာရီ _ နေ့လယ်(၁:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်ပြီး၊ သောကြာနေ့ကိုတော့ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဗြိတိသျှသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၃၈၀ ၃၂၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၂၃၈) ဓမ္မစေတီလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ်(၁)နာရီ _ နေ့လယ်(၂)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်… စင်္ကာပူသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၅၉ ၀၀၁) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အမှတ်(၉၄) ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၁)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ထိုင်းသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၂ ၇၈၄) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အမှတ်(၁၀၀) နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅:၁၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်.... ဂျပန်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၄၉ ၆၄၄) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၁)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... တရုတ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၁ ၂၈၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၅၄၅-၅၄၇) ကုန်သည်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၁)နာရီ _ နေ့လယ်(၁:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၅:၃၀)ထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... အိန္ဒိယသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၃၈၈ ၄၁၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၉၇) တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၂)နာရီမှ ညနေ(၆)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ကိုရီးယားသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၂၇ ၁၄၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၈၂) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပိတ်ရက်မရှိ (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... မလေးရှားသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၀ ၂၄၈) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၇) ဂန္ဓာမာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဖိလစ်ပိုင်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၅၈ ၁၄၉) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃၄) ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကမ္ဘောဒီးယားသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၄၉ ၆၀၉) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၀၉/၂ ဘီ) အောင်တော်မူလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၃၀ ၆၁၇၄) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃၈) ဇကားဝါလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပိတ်ရက်မရှိ (၂၄)နာရီ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ရုရှားသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၄၁ ၉၅၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုက်ပါသည်။
အမှတ်(၉) ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၁)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၄၈ ၉၅၁) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃) အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ Golden Valley Tower ဗဟန်းမြို့နယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့နှင့် ကြာသပတေးနေ့တွင် မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁)နာရီ၊ အင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် သောကြာနေ့များတွင် မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၂)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်.... အီတလီသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၂၇ ၁၀၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၄-အေ) ပြည်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ပါကစ္စတန်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၂ ၈၈၁) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃၁၇/၃၁၉) ဦးဝိစာရလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဘရူနိုင်းသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၂၆ ၉၈၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၈၈) ကမ်းနားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂:၃၀)နာရီ _ နေ့လယ်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ သြစတေးလျသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၅၁ ၈၁၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၅) ခပေါင်းလမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီ၊ သောကြာနေ့တွင် မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၂:၃၀)ထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... အစ္စရေးသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၁၅ ၁၁၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၅-အေ) အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ကာတာနိုင်ငံသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၃၈ ၄၈၁) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၆) နတ်မောက်ရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ နီပေါသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၄၅ ၈၈၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁-အေ) တော်ဝင်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၂)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀) ထိဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... လာအိုသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၂ ၄၈၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃၄) တော်ဝင်လမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ ညနေ(၃:၄၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... သီရိလင်္ကာသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၂ ၈၁၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၂)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဗီယက်နမ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၁၁ ၃၀၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၀၀) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၅၄ ၄၆၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
9th Floor, CentrePoint Towers ဆူးလေဘုရားလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါတယ်။ တနင်္လာနေ့မှ ကြာသပတေးနေ့တွင် မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်ပြီး၊ သောကြာနေ့မှာတော့ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ်(၁:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ကနေဒါသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၃၈၄ ၈၀၅) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၀၂) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ပြင်သစ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၁၂ ၅၂၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃) ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆွီဒင်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၀၄ ၀၆၈) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၃) ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဒိန်းမတ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်ရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၃၈ ၇၀၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၇) ပြည်သူ့လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ နော်ဝေသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၆၆၃ ၈၈၇) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၄၃-စီ) အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ရွှေတောင်ကြား (၂)ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈)နာရီမှ နေ့လယ်(၁၂)နာရီ _ နေ့လယ်(၁)နာရီမှ ညနေ(၄:၃၀)ထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... နယူးဇီလန်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၃၀ ၆၀၄၆) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၁) ခပေါင်းလမ်း၊ (၅)မိုင်ခွဲ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၃၄ ၇၅၄) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အင်းယားမြိုင်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၅)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်.... သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၃၁၇၅ ၇၅၈၀) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၄၂) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၈:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ်(၂)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... ဘရာဇီးနိုင်ငံသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ်( ၀၁ ၂၂၁ ၂၆၈) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၈၁) ပြည်ထောင်စုရိပ်သာလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၃)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... အီဂျစ်သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၂၂၂ ၈၈၆) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၆-S) အင်းယားရိပ်သာလမ်း၊ (၁၀)ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ထိ မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်... သံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၆၅၈ ၂၅၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အမှတ်(၁၁၄-အေ) အင်းယားလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆာဘီယားနိုင်ငံသံရုံးကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် (၀၁ ၅၁၅ ၂၈၂) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
International Embassies in Yangon
These are the collections of the international embassies and their addresses in Yangon.
Embassy of United State of America
No. (110) University Avenue Road, Kamaryut Township.
Opening time is Monday-Friday (8am-12pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01536509
No. (80) Kan Nar Road, Kyout Tadar Township.
Opening time is Monday-Thursday (8am-12:30 pm and 1:30pm-4:30pm) and
If you want to contact, you can directly call Tel: 01380322
No. (238) DaMaSayTe Road, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (8:30am-1pm and 2pm-5pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01559001
No. (94) Pyay Road, Dagon Township.
Opening time is Monday-Friday (9am-12pm and 1pm-5pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01222784
No. (100) NatMout Road, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (830am-5:15pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01549644
No. (1) Baho Road.
Opening time is Monday-Friday (9am-11am).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01221280
No. (545-547) Merchant Road.
Opening time is Monday-Friday (9am-1pm and 1:30pm-5:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01388412
No. (97) University Avenue Road, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (9am-12pm and 2pm-6pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01527142
No. (82) Union Avenue Road.
There is no off-day and open 24 hrs.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01220248
Embassy of Phillipine
No. (7) Gandamar Road.
Opening time is Monday-Friday (9am-5pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01558149
No. (34) Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Township.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01549609
Embassy of Republic of Chech
No. (109/2 B) Aung Taw Mu Road, Bahan Township.
If you want to contact, you can directly call Tel: 012306174(extra one number)
No. (38) Sakawa Road, Dagon Township.
There is no off-day and open 24hrs.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01241955
No. (9) Bo Gyote Museum Road, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (8am-11pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01548951
No. (40) Nat Mout Street / No. (3) Inya Myaing Street, Golden Valley Tower.
Opening time is Monday and Thursday (8am-1pm), Tuesday, Wednesday and Friday (8am-2pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01527100
Embassy of Perkistan
No. (4-A) Pyay Road.
Opening time is Monday-Friday (8am-4pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01222881
Embassy of Breunai
No. (317/319) U WiSaYa Road, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (8:30am-4:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01526985
No. (88) Kan Nar Road.
Opening time is Monday-Friday (8am-12:30pm and 1pm-4pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01251810
Embassy of Isrial
No. (15) Kapoung Street, Hlaing Township.
Opening time is Monday-Thursday (9am-5pm) and Friday (9am-2:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01515115
No. (15-A) Inya Myaing Street.
Opening time is Monday-Friday (9am-4pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01538481
No. (16) Nat Mout Avenue Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01545880
No. (1-A) Taw Win Road.
Opening time is Monday-Friday (8:30am-12pm and 2pm-4:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01222482
Embassy of Seri Linka
No. (34) Taw Win Road.
Opening time is Monday-Friday (8am-3:45pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01222812
No. (70-72) Tan Lwin Street, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (9am-12pm and 2pm-5pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01511305
No. (100) Union Avenue Road, Dagon Township.
Opening time is Monday-Friday (8am-12pm and 1pm-4pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01254465
9th Floor, CenterPoint Towers, Sule Pagoda Road, Kyout Tadar Township.
Opening time is Monday-Thursday (8:30am-4:30pm) and Friday (8:30am-1:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 384805
No. (102) Union Avenue Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01212520
No. (16/3) Inya Road, Kamaryut Township.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01504068
No. (3) Pyay Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01538700
No. (7) Pyi Thu Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01663887
Embassy of New Zeland
No. (43-C) Inya Myaing Street, Golden Valley (2) Quarter, Bahan Township.
Opening time is Monday-Friday (8am-12pm and 1pm-4:30pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 012306046
Embassy of Swiszerland
No. (11) KaPoung Street,5miles andahalf, Pyay Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01534754
No. (84) Pan Hlaing Street, San Chung Township.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01231757580
No. (42) Union Avenue Road.
Opening time is Monday-Friday (8:30am-2pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01221268
No. (81) Union Avenue Road.
Opening time is Monday-Friday (9am-3pm).
If you want to contact, you can directly call Tel: 01222886
Embassy of Sudi Arabia
No. (6-S) Inya Avenue Street, 12 Quarter, Mayangone Township.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01658252
No. (114-A) Inya Road.
If you want to contact, you can directly call Tel: 01515282